Mise en œuvre en Afrique du plan d’Action de Kazan
Andry Rajoelina, Champion de la mise en œuvre de l’éducation physique de qualité
Le Président Andry Rajoelina a été nommé par 37 pays africains, champion de la mise en œuvre de l’éducation physique de qualité et de la mise en œuvre en Afrique du plan d’Action de Kazan, confirmant ainsi la confiance de la communauté internationale au leadership malagasy.
JIOI 2019 :Tonga ny andiany fahatelo sady farany tamin’ireo atleta
Miisa 50 ireo atleta malagasy tonga avy any Maorisy omaly, niaraka atmin’ny delegasion’ny ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Andiany farany tamin’ireo atleta niatrika sy nifaninanana tamin’ny lalaon’ny Nosy teto amin’ny ranomasim-be indianina, andiany fahafolo, ireo nigadona an-tanindrazana ny tolakandron’ny 30 jolay ireo. Atleta niady ho an’ny voninahi-pirenena ary nitondra vokatra tsara ihany koa. Anisan’ireo nitondra vokatra tamin’ity lalaon’ny Nosy ity ohatra ny taranja hazakazaka na ny atletisma. Nahazo medaly volamena teo amin’ny 4x100 m i Arold ary mirehareha fa niady ho an’ny tanindrazana tokoa.
Niakatra ny tahan’ ireo mpiadina ara-panatanjahan-tena BEPC raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa.
Maro ireo toerana anaovana ny adina ara-panantanjahatena BEPC, saingy raha ny andron’ny 30 jolay, naresaka Mahamasina. Nitombo ny isan’ny mpianatra hanala fanadinana Bepc niatrika ny adina ara-panatanjahantena tamin’ity taona ity.
JIOI : Nigadona an-tanindrazana ireo atleta Malagasy.
Atleta Malagasy 191, andiany faharoa tamin’ireo niatrika ny lalaon’ny Nosy, no tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny tolakandron’ny 29 jolay 2019.
Nikoritsana tetsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo medaly norombahan’ireo atleta Malagasy tamin’ny lalaon’ny Nosy, rehefa nigadona teto an-tanindrazana omaly.
CHAN : Nahazo fanampiana ny Barea
Hiatrika ny lalao fifanintsanana amin’ny CHAN na ny Championnat d’ Afrique des Nations ny ekipa faharoan’ny BAREAN’i Madagasikara ny alahady ho avy izao, eo amin’ny kianjaben’ny Mahamasina. Hifanandrina amin’ny ekipam-pirenen’i Mozambique izy ireo.
LALAON’NY NOSY 2019.
Hanomboka ny zoma faha 19 ny volana jolay ho avy izao ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 28 jolay ny lalaon’ny Nosy eto amin’ny ranomasimbe Indiana, andiany faha-10, atao atsy amin’ny nosy Maurice. Amin’ireo taranja 14 mandritra ny fifaninana, taranja 12 no ananan-tsika mpisolon-tena hiaro ny voninahim-pirenena.